Xildhibaanno ka cabanaya ami darrada Villa Hargeysa | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaanno ka cabanaya ami darrada Villa Hargeysa
Xubin muhiim ah ayaa KON, u sheegtay in kulanka soo socda ee Golaha Shacabka uu ka dhacayo Villa Hargaysa, markaas ayaana la filayaa in Xildhibaannada qorshaan wada soo jeediyaan in amni darted kulamada Aqalka hoose loo wareejiyo Teendhada Afisyyo oo ah, halkii lagu dhaariyay Xidhibaannada, laguna dooranayo Madaxweynaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn u xoogeystay, warar hoose oo sheegaya in Xildhibaannada Golaha Shacabka, uu ka dhex billowday guux xooggan, oo xubno badan ku doonayaan in kulamada Baarlamaanka loo wareejiyo Teendhada Afisyooni ee Xerada Xalane, kadib madaafiicdii shalay.
Inta badan Xildhibaannada laga soo doorto Maamullada Galmudug, Hirshabeelle, Jubaland iyo Puntland, ayaa doonaya in Villa Hargeysa, laga raro kulamada Golaha inta laga dooranayo Madaxweynaha, iyagoo taas u sababeynaya in uusan jirin amni la isku hallayn karo iyo damaanad qaad la xariira badqabka Baarlamaanka.
Sidoo kale, Xildhibaannada mucaaradka ku ahaa Farmaajo sanadihii la soo dhaafay, ayaa rumeysan in Kooxda waqtigu ka dhamaaday ay masuul ka ahaayeen madaafiicdii shalay lagu garaacay Xarunta Baarlamaanka, halkaasoo lagu meel mariyay ajande uu Fahad ka soo hor jeeday oo lagu dadajinayay doorashada Guddoonka Golayaasha.
Howl-wadeenno ka tirsan hab-dhowrayaasha Golaha, oo Keydmedia Online, wax ka weydiisay jiritaanka arrinkaan, ayaa xaqiijiyay in Xildhibaanno isku aragti ah, xalay billaabeen ololahan, hayeeshee, aan la hubin in la aqbali doono, maadaama Baarlamaanku wajahayo howlo is dabajoog ah Siidedda maalin ee soo aaddan.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Musharrax Madaxweyne, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo shalay ku sugnaa Xarunta Baarlamaanka, isla-markaana hoobiyayaashii soo daaday ay uga dhawacmeen labo ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah, ayaa dhankiisa soo jeedeyay aragtida ah in kulamada Baarlamaanka laga beddelo Villa Hargaeysa.
Talaabadaan ayaa ka dhigan, in kala aamin baxa hay’adaha Dowladdu gaaray halkii ugu sarreysa, in shan sano kadib, Xildhibaannadu ka qaxayaan Xaruntoodii, ayaa iyaga muujineysa sida Kooxda waqtigu ka dhamaaday ugu fashilmeen amniga Caasimadda, gaar ahaan aagga xeeydaabka Dowladdu ku shaqeyso ee Madaxtooyada.
Hab-dhowrayaasha la hadlay KON, waxa ay sheegeen in xitaa Xildhibaanno aan salaantu ka dhaxayn oo sanad ka hor bishaan oo kale la kala safnaa argatidii muddo kordhinta iyo Ciidankii Badbaado Qaran ay Golaha ku wada jiraan, isla-markaana, xiisad siyaasadeed oo abuuranta ay sababi karto gacan ka hadal dhiig ku daadan karo.